Wareegtada smartwatch ee Samsung ayaa loogu yeeri doonaa Galaxy Gear A | Androidsis
Xilliga dharka la gashan karo ayaa hadda bilaabmay waxaana durba suuqa ka jira dhowr smartwatches. Samsung waxay ka mid ahayd wax soo saarayaashii ugu horreeyay ee ku soo siqa suuqa iyagoo sii daayay Samsung Galaxy Gear, oo ah kii ugu horreeyay ee smartwatch ah. Shayga ayaa shaqeyn waayey maxaa yeelay suuqa lama diyaarin sidaas darteed, markii dambe, noocyo kala duwan oo ka mid ah waxyaabahan la xiran karo ayaa suuqa soo galay.
Hadda iyo dhowr sano kadib, Samsung waxay dooneysaa inay dib-u-sii-dayso qalab aaladda Galaxy Gear. Qalabkan ayaa loo yeeri doonaa Samsung Galaxy Gear A oo waxay noqon doontaa smartwatch muuqaal wareeg ah oo dhinac iska dhigaya nidaamka qalliinka ee la gashan karo ee Google, Android Wear, haddii ay sidaas ku sameyn doonana nidaamkeeda hawlgalka ee kiisaskan, waa hore loo yaqaan Tizen.
Dhammaantood waxay bilaabeen markii ay soo baxeen wararkii ugu horreeyay ee sheegaya in shirkadda Kuuriya ay ka shaqeyneyso smartwatch hoosta magaca lambarka Orbis, oo aan horay uga hadalnay maalinteeda baloogga. Haatan xantaas mar kale ayey sii xoogeysaneysaa waxaana dhameystiraya xogtii ugu dambeysay ee ku saabsan mustaqbalka Samsung smartwatch.
Macluumaadkan cusub ee ka imanaya gole caan ah oo ku saabsan aaladaha sumadda Kuuriya, ayaa filaya in Samsung Galaxy Gear A wuxuu yeelan doonaa a processor laba-geesood ah Exynos iyo xawaare saacad ah 1.2 GHz, oo ay weheliso Mali-400 GPU. Oo ay la socdaan this SoC lagu dari doonaa xusuusta RAM ah 768 MB, 4 GB oo keydinta gudaha ah iyo batari leh awood 250 Mah. Naqshadeedu waxay la mid noqon doontaa ta Moto G, in kastoo weli la arki doono nooca qalabka loo isticmaali doono dhismihiisa. Shaashadu waxay lahaan doontaa guddiga taabashada SuperAMOLED oo hoos yimaada xalka 360 x 360 pixels.
Marka laga hadlayo qeexitaannada kale ee aan muhiimka ahayn ee ku saabsan mustaqbalka xidhashada Kuuriya ee aan helno, Wi-Fi, Wi-Fi Tooska ah, GPS, accelerometer, gyroscope, barometerka iyo dareemayaasha garaaca wadnaha. Sidii aan uga faallaynay bilowgii maqaalka, Samsung waxay go’aansatay in nidaamka qalliinka ee Galaxy Gear A-kan uu wado, uu yahay Tizen halkii aad ka isticmaali lahayd Wear Android. Dhaqdhaqaaqani wuxuu muujinayaa in shirkaddu rabto nidaamkeeda hawlgalka inuu ku habboon yahay aaladaha yaryar sida saacadaha casriga ah, jijimooyin ama aalado kale oo la gashado oo aad ka fekeri karto.
Ma garanayno sida ay tallaabadani u socon doonto, laakiin layaab ma leh in haddii tijaabadu shaqeyn weydo, Samsung ay maalin maalmaha ka mid ah sii deyn doonto nooc ka mid ah Gear A-ga hoostiisa ku jira Android Wear. Waqtigaan la joogo wax yar ayaan kaaga sheegi karnaa wax ku saabsan saacaddan casriga ah, sidaas darteed waxaan u dheg taaga doonnaa dhaqdhaqaaq kasta oo ay leeyihiin Kuuriya, gaar ahaan dhacdada soo socota ee Galaxy Note 5, halkaasoo Gear A uu ka isticmaali karo joogitaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Smartwatch » Wareegtada smartwatch ee Samsung ayaa loogu yeeri doonaa Galaxy Gear A